UJuno Spacecraft Indlela yokubhabha -
Iphi iJuno Spacecraft ngoku?
Amaphepha oMsebenzi woMkhathi
UMatiloshe 2 Uvulindlela kunye nohambo Ukuhamba UGalileo ICassini-Huygens
Rosetta Umthunywa Ukusa IiHorizons ezintsha UJuno
IHayabusa2 I-OSIRIS-REx ExoMars
Uhlelo lokusebenza olungentla lubonisa umkhondo weJuno Spacecraft kunye nalapho ikhoyo ngoku. Unokuphindisa oopopayi ngasemva ngexesha lokuba ubukele ukumiliselwa kwayo kunye nokuhamba kwayo komhlaba ngaphambi kokungena kwiJupiter Orbit ngo-2016, kunye nokuqhekeka eJupiter ekupheleni kwenjongo yayo ngoJulayi 2021.
UJuno ngoku ujikeleze malunga neJupiter ethatha malunga neentsuku ezingama-53 ukugqiba i-orbit nganye. Ekuqaleni yayenzelwe ukuba kutshiswe irokethi ngo-Okthobha u-2016 ukuzisa isiphekepheke kwisithuba seentsuku ezili-14. Nangona kunjalo iqela ligqibe kwelokuba lihlale kumngcipheko omncinci weentsuku ezingama-53 de kube sekupheleni kobufundisi. Esi sigqibo sithathiwe emva kokuba isiphekepheke singene kwindlela ekhuselekileyo ngexesha lokubhabha okusondeleyo ekuqaleni kuka-Okthobha, 2016. Uhlalutyo lubonise ukuba ii-valves ezimbini zokujonga i-helium zisebenze kancinci kancinci kunokuba bekulindelwe zikhokelela kumaxhala enjini engasebenziyo njengoko bekuyalelwe. Inqaku
Isilimela, i-2018: Umsebenzi kaJuno wandiswa
I-NASA ivumile uhlaziyo kwimisebenzi yesayensi kaJuno kude kube nguJulayi 2021. Oku kubonelela ngeenyanga ezongezelelweyo ezingama-41 kwi-orbit ejikeleze iJupiter kwaye iya kwenza ukuba uJuno afezekise iinjongo zayo eziphambili zesayensi. UJuno ukwimijikelezo yeentsuku ezingama-53 kunemijikelezo yeentsuku ezili-14 njengoko bekucwangcisiwe ekuqaleni ngenxa yenkxalabo malunga nezivalo kwinkqubo yesibhakabhaka yesiphekepheke. Le orbit inde kuthetha ukuba kuya kuthatha ixesha elininzi ukuqokelela idatha yesayensi efunekayo. Inqaku
Uyilo lwamaqhina e-celtic kunye neentsingiselo zazo
Ngomhla kaMatshi, i-2018: IJupiter ineenkanyamba ezisisigxina kwiipali zayo
Lo mfanekiso udityanisiweyo, uvela kwidatha eqokelelwe sisixhobo seJovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) esikwi-NASA's Juno mission yeJupiter, ibonisa isitshingitshane esiphakathi kwipali yasemantla kwiplanethi kunye neenkanyamba ezisibhozo eziyirhangqileyo. Imivuzo: NASA / JPL-Caltech / SwRI / ASI / INAF / JIRAM. Umfanekiso opheleleyo kunye neencazo
Izitshingitshane ezinkulu ezirhangqe iipali zomntla nomzantsi weJupiter zinyamezele iimpawu zomoya kwaye azifani nayo nayiphi na enye into ekudibana nayo kwinkqubo yethu yelanga. Inqaku
Indawo enkulu ebomvu kaJupiter-nge-10 kaJulayi ka-2017
Oku umfanekiso ophuculweyo wombala weJupiter's Great Red Spot yenziwa sisazinzulu esingummi uGerald Eichstädt esebenzisa idatha evela kumfanekiso weJunoCam kwisiphekepheke seNuno sikaJuno.
Umfanekiso ulungele ukukhanya ukhanyisiwe kwaye uqiniswe ngamandla ukutsala amehlo ababukeli kwisiqhwithi sodumo kunye nesiphithiphithi esijikelezileyo.
Umfanekiso uthathwe nge-10 kaJulayi ngo-2017 ngo-07: 07 ebusuku. I-PDT (nge-10: 07 pm EDT), njengoko isphekepheke sikaJuno senza i-7th kufutshane neJupiter. Ngexesha lokuthathwa komfanekiso, isiphekepheke sasimalunga neekhilomitha ezingama-6,130 (i-9,866 yeekhilomitha) ukusuka kwiincopho zamafu eplanethi.
Inguqulelo yoqobo yalo mfanekiso kunye nezinye iinguqulelo ezikhoyo Apha .
Idatha yeNzululwazi ukusuka kumanqanaba okuqala asezantsi eJupiter (25th kaMeyi 2017)
Le semina inomdla isibonisa iziphumo zokuqala ezivela kwimishini kaJuno. Icandelo eliphambili levidiyo yimizuzu yokuqala engama-40 kwaye ligubungela imifanekiso yeplanethi, ubume bomoya kunye nomazibuthe. Emva koko yimibuzo neempendulo.
I-Jupiter's South Pole- ithathwe nguJuno
Isiphekepheke se-NASA i-Juno senyuka ngokuthe ngqo ngaphezulu kwepali yase-Jupiter xa iJunoCam ifumene lo mfanekiso ngoFebruwari 2, 2017, ukusuka kubude obumalunga neekhilomitha ezingama-62,800 (iikhilomitha ezili-101,000) ngaphezulu kwamafu aphezulu. Lo mfanekiso wenziwa sisazinzulu esingummi uJohn Landino. Olu hlobo lombala luphuculweyo lubalaselisa amafu aphakamileyo aqaqambileyo kunye neziphepho ezininzi ezirhangqileyo ze-oval. Imivuzo: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / John Landino
Isiphekepheke se-NASA i-Juno siphakamise ubulumko obuphezulu bomoya we-Jupiter xa iJunoCam ifota lo mfanekiso ngo-Feb. -top. Imivuzo: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Roman Tkachenko
IJuno Flight Path
UJuno yasungulwa nge-5 ka-Agasti, ngo-2011, kwaye yangena kwi-orbit malunga neJupiter ngoJulayi 4 ka-2016 kwaye yayicwangcisiwe ukuba ifunde iplanethi kude kube nguFebruwari 2018 xa yayiza kucinywa kwaye yangena kwiJupiter. Nangona kunjalo ukongezwa kwimishini kuthetha ukuba isiphekepheke siza kuphila kude kube nguJulayi 2021.
Umsebenzi kaJuno ujolise ekuphuculeni ukuqonda kwethu ukuqala kwenkqubo yelanga ngokuveza imvelaphi kunye nokuvela kweJupiter. Ngokukodwa, uJuno uza…
Chonga ukuba angakanani amanzi kwiatmosfere ye-Jupiter, enceda ekuchongeni ukuba yeyiphi na ithiyori yokwakheka kweplanethi echanekileyo (okanye ukuba ngaba kufuneka ithiyori entsha)
Jonga nzulu kumoya weJupiter ukulinganisa ubume, ubushushu, intshukumo yelifu kunye nezinye iipropathi
Imephu yeJupiter yemagnethi kunye nomhlaba womxhuzulane, utyhila ubume obunzulu beplanethi
Jonga kwaye ufunde i-Jupiter's magnetosphere kufutshane neepali zeplanethi, ngakumbi ii-auroras-izibane ezisemantla nezisezantsi zeJupiter-zibonelela ngokuqonda okutsha malunga nendlela umhlaba omkhulu wamandla ombane awuchaphazela ngayo umoya wayo.
Yintoni le ikhetheke kangaka ngoJuno?
UJuno sisigqibo sesibini kuphela sokujikeleza iJupiter (uGalileo ungowokuqala) kwaye usondela kufutshane neJupiter. Usuku lwayo lwe-14 (ekuqaleni-ngoku ngoku lusuku lwe-53) ye-polar orbit iphezulu kakhulu nge-probe edlula kakhulu kufutshane neplanethi kwindawo ekufutshane nayo, kwaye iskima kuphela i-4300km ngaphezulu kweeplanethi ngaphezulu komhlaba. Oku kuthetha ukuba idlula kwi-Jupiter's magnetosphere enamandla enamanqanaba emitha anokuqhotsa uninzi lwe-elektroniki (okanye abantu ukuba banokufika apho) ngokukhawuleza okukhulu. I-elektroniki ezibuthathaka zikaJuno zikhuselwe ngaphakathi kwe-1 cm yeendonga ze-titanium ezinobunzima eziza kunceda ukunciphisa i-radiation kakhulu.
Kuya kufuneka inyamezele kwimitha yokukhanya kufutshane (ezinye iiyure ezi-2-3 ukuya) kodwa iya kuchitha uninzi lwe-orbit yayo ngakumbi kwindawo enobungozi. Nangona kunjalo ezinye zeenzwa zalo akulindelanga ukuba zigcine yonke i-37 orbit mission.
Ixesha lexesha likaJuno
Iimpawu eziphambili zendlela yokubaleka kukaJuno zidweliswe apha:
Nge-Agasti 2011 Yaziswa
Nge-Agasti ka-2012 Izilungiso zendlela
Okthobha 2013 I-flyby yomhlaba yokunyusa isantya (ukusuka kwi-126,000 ukuya kwi-150,000 km / h (78,000 ukuya kwi-93,000 mph))
NgoJulayi 5, 2016, 02:50 Ukufika eJupiter kunye nokufakwa kwe-polar orbit (1st orbit)
Nge-Agasti 27, 2016, 13:44 I-Perijove (= inqaku lendlela ekufutshane neJupiter kwi-orbit yesiphekepheke yangoku) 1
Nge-19 ka-Okthobha ka-2016 I-Perijove 2: Inkqubo yokuNcitshiswa kweXesha eliCwangcisiweyo, kodwa eyona nkqubo iphambili yokunyusa ipetroli ayisebenzi njengoko kulindelwe.
Nge-11 kaDisemba ngo-2016, ngo-17: 04 IPerijove 3
NgoFebruwari 2, 2017, 12:57 IPerijove 4
Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 2017, ngo-08: 52 IPerijove 5
Ngomhla we-19 ka-Meyi 2017, -06: 00 IPerijove 6
NgoJulayi 11, 2017 IPerijove 7: Bhabha ngaphaya kweGreat Red Spot
NgoSeptemba 1, 2017 IPerijove 8
Oktobha 24, 2017 IPerijove 9
Nge-16 kaDisemba ngo-2017 IPerijove 10
NgoFebruwari 7, 2018 IPerijove 11
Epreli 1, 2018 IPerijove 12
Ngamana 24, 2018 IPerijove 13
Julayi 16, 2018 I-Perijove 14, ukuphela komishini ephambili.
... Ukwandiswa kweeMishini
Julayi 30, 2021 IPerijove 35, ukuphela kokuthunyelwa okwandisiweyo.
Ukulahlwa kwesiphekepheke ngohlobo lokucocwa kwe-de-orbit kuJupiter
umbala omnyama umele ntoni
Indoda ye-scorpio kunye nothando lomfazi
virgo umfazi nendoda taurus ngokwesondo iyahambelana